इटोको सन्न्यासमा साथी मस्सीको सन्देश ! | Hamro Khelkud
इटोको सन्न्यासमा साथी मस्सीको सन्देश !
एजेन्सी – क्यामरुन तथा बार्सिलोनाका महान खेलाडी सामुइल इटोले खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरे । उनले आफ्नो दुई दशक भन्दा लामो खेल जीवनबाट सन्यास लिने घोषणासँगै पूर्व सहकर्मी एवंम निकटका साथी लियोन मेस्सीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिएका छन् ।
मेस्सी र इटोलीले नोउ क्याम्पमा सन् २००४ देखि २००९ सम्म पाँच वर्षसँगै बिताएका थिए । अर्जेन्टिनी सुपरस्टार मेस्सीले इन्स्टाग्राममा सन्देश लेख्दै उनको खेल जीवनका लागि बधाई दिएका छन् ।’ तिमिले खेलबाट सन्यासको निर्णय लियौं सामु ? मलाई लाग्छ तिमि कम्तीमा ४० वर्ष पुग्यौं होला । आउने दिनका लागि तिमिलाई शुभकामना । अब मनमा जे गर्न इच्छा छ गर ।’
इटो आफ्नो समयमा सफल खेलाडी हुन् । १९९६ मा रियल म्याड्रिडको एकेडेमीमा आबद्ध भएका उनी अर्को वर्ष पहिलो रोजाइमा पर्न सफल भएका थिए । त्यसपछि उनी केहि समय लोनमा पनि गए ।
बार्सिलोना र इन्टर मिलानमा उनी बढी सफल रहे । उनले लगातार दुई पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिते । युरोपको माथिल्लो स्तरको क्लबबाट ७ सय १८ खेले खेलेका उनले ३ सय ५९ गोल गरेका थिए । १९९७ बाट व्यववासयिक खेल जीवन सुरु गरका उनले झन्डै एक दर्जन क्लबबाट खेल्ने क्रममा १ सय १६ गोलमा एसिस्ट पनि गरे ।
२००३ देखि २०१० सम्म चार पटक अफ्रिकन वर्षका उत्कृष्ट फुटबल खेलाडी घोषित इटोले आफनो खेल जीवनमा स्पेट र इटालीमा गरि चार पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिते । त्यस्तै उनले देशका लागि २००० को सिड्नी ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जिते ।